मंगल ग्रहमा नासाको यान पुग्यो, वैज्ञानिकले मनाए उत्सव::Online News Portal from State No. 4
मंगल ग्रहमा नासाको यान पुग्यो, वैज्ञानिकले मनाए उत्सव
यस मिसनमा खर्च मात्रै ९९.३ करोड डलर (करिब ११३०५ करोड रुपैयाँ) भएको छ ।
वासिङ्गन, ११ मंसिर – अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी (नासा) को एउटा यान अन्तत: मंगल ग्रहमा अवतरण गरेको छ । यो यान सोमवार राति १:३९ बजे मंगल ग्रहमा सफलतापूर्वक उत्रिएको हो । नासाका अनुसार पहिलो पटक एक्सपेरिमेन्टल स्याटेलाइट्सले कुनै अन्तरिक्षयानलार्इ पच्छयाउँदै निगरानी राखेको हो । यस मिसनमा खर्च मात्रै ९९.३ करोड डलर (करिब ११३०५ करोड रुपैयाँ) भएको छ । यी दुर्इ स्याटेलाइट मंगलमा पुगेको अन्तरिक्ष यान भन्दा ६ हजार माइल पछाडि गइरहेका थिए । नासाले यसै साल ५ मेमा क्यालिफोर्नियाको वन्डेनबर्ग एयरफोर्स स्टेशनबाट एटलस वी रकेटमार्फत मार्स ल्यान्डर प्रक्षेपण गरेका थिए । यो इनसाइट यानका लागि अवतरणमा लाग्ने ६ देखि ७ मिनेट समय अत्यन्तै महत्वपूर्ण थियो । यस क्रममा पछ्याइरहेका दुवै स्याटेलाइटमार्फत् विश्वभरका वैज्ञानिकले इनसाइटमाथि नजर राख्न सके । यी स्याटेलाइट ‘वाल-ई’ र ‘ईव’ ले आठ मिनेटमा इनसाइट मंगलमा उत्रेको जानकारी पृथ्वीमा पठाइरहे । नासाले यस पुरा मिसनको लाइभ कभरेज दिएको थियो ।
इनसाइटका खास कुरा
३५८ किलोको इनसाइटको पूरा नाम ‘इन्टिरियर एक्सप्लोरेशन युजिङ्ग सिस्मिक इन्भेस्टिगेसन्स’ हो। सौर्य ऊर्जा र ब्याट्रीबाट चल्ने यो यान २६ महिनासम्म काम गर्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । ७ हजार करोडको यस मिसनमा अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स र युरोपका अन्य १० देशका वैज्ञानिक सामेल थिए । इनसाइट परियोजनाका प्रमुख वैज्ञानिक ब्रुस ब्यानर्टले यो एक टाइम मेसिनले ४.५ अर्ब वर्ष पहिले मंगल, पृथ्बी र चन्द्रमा जस्ता ढुंगे ग्रह कसरी बने ? यसको मुख्य उपकरण सिस्मोमिटर (भूकम्पमापी) हो जसलार्इ फ्रान्सेली अन्तरिक्ष एजेन्सीले बनाएको हो । अतवरणपछि ‘रोबोटिक आर्म’ले सतहमा सेस्मोमिटर लगाउनेछ । अर्को मुख्य भाग भनेको ‘सेल्फ ह्यामरिङ्ग’ हो जसले ग्रहको सतहमा ऊष्माको प्रभाव जाँच गर्नेछ ।
नासाले इनसाइट अवतरण गराउन इलिसियम प्ल्यानिशिया नामको ल्यान्डिङ साइट चुनेको छ। यस स्थानको सतह सम्मो थियो । यसबाट सिस्मोमिटर लगाउने र सतहमा ड्रिल गर्न सजिलो भयो । इनसाइट मंगलको वातावरणमा प्रवेशका क्रममा अनुमानित गति १२ हजार ३०० माइल प्रतिघण्टा रह्यो । भूकम्पबाट पैदा हुने । सिस्मिक वेवबाट अब मंगल ग्रहको नक्सा बनाइने भएको छ । भूकम्पबाट पैदा हुने सिस्मिक वेभबाट मंगलको आन्तरिक नक्सा बन्नेछ । पहिले पठाइएको क्युरोसिटी अन्तरिक्ष यान पानीमाथि केन्द्रित थियो । तर यो अन्तरिक्ष यानले मंगलको संरचनाको अध्ययन गर्नेछ ।
पृथ्वी जस्तै मंगल
मंगल ग्रह धेरै कुरामा पृथ्वी जस्तै समान छ। दुवै ग्रहमा ठुला ठुला पहाड छन् । तर पृथ्वीको तुलनामा यसकोचौडाई आधी, भार एक तिहाई र घनत्व ३० प्रतिशत कम छ ।